Me kwakhona ... WWII
umbuzo Me kwakhona ... WWII
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #278 by PAYSON
Ndim kwakhona. Ndandineminyaka nje spitballin 'ndicinge ukuba akukho nto wakha beenzame ukwenza icandelo II. Ubukhulu becala, akukho namnye waba imvakalelo esiphaphazelayo naziphi moya ukusuka ngelo xesha. Mhlawumbi kuya kuba ngamava amatsha liphela, ukuba bakuyeke ngoku qho emva koko ukusuka Mach 2 - 3, abone imvakalelo ukugaleleka kwi / phezulu endala kakhulu osicaba endaweni yokumisa mucho / fasto phezu ononkontsho ijike. Ngoku ndiza kuba mnye Ndingathanda ukuba izithuthi njengomthuthi encinane. (I Corsair thina ngoku wonwabe kakhulu. Ndiya kuba umfuziselo esityhidiweyo enye kwezikim ukupeyinta.)
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #288 by Gh0stRider203
Mna 1000% ngo le!
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #297 by PAYSON
Eziliwaka PERCENT? !!!!!? WOW, kufuneka into elandelayo COMIN 'INDLELA; -!]
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #328 by Gh0stRider203
ewe mna kakhulu ukubhabha jumbos for VA yam .... kodwa ndinganithandi Iintaka WWII
Ixesha ukwenza page: 0.194 imizuzwana